Velashape Body Contouring Factory |China Velashape Body Contouring Manufacturers and Suppliers
Mahomby ny vatana malefaka kumashape slimming rf vatana manefy lanja very ketrona fanesorana ny milina
1. Fanamafisana ny hoditra sy fanalana ketrona ny tarehy
2. Famolavolana vatana, body contouring slimming lanja very
3. Esory ny cellulite, manandratra ny feny.mitsonika ny tavy, ny strech mark, ny hodi-boasary, sns.
Ity fitsaboana tsy fandidiana sy tsy invasive ho an'ny cellulite ity dia misy singa efatra, izay miaraka dia hita fa mahomby amin'ny fanamafisana sy fanalefahana ny hoditra: angovo radiofrequency (RF), angovo infraredlight, ary vacuum mekanika, fanorana mandeha ho azy.
♦ 40KHz Cavitation tahony:
Tavy mipoaka mahery, mampitraka sela matavy, deliquescent adipose, mampihena ny habetsahan'ny sela matavy.
♦ Vacuum Bipolar RF mitantana:
Manaova sela matavy amin'ny toe-javatra mavitrika haingana, mba hahatonga ny sela hamokatra hafanana, dia afaka mivoaka ny tavy be loatra sy ny vivotoksin'ny vatana ao anatiny.
♦ Fitanana RF enina-polar:
Manafoana ny tavy bebe kokoa, manampy amin'ny fandroahana ny tavy sy ny poizina tafahoatra amin'ny vatana amin'ny alàlan'ny fihanaky ny hatsembohana sy ny fihodinan'ny hepato-enteric.
♦ Fitanana RF-polar efatra:
Manalefaka ny tavy; Manalefaka ny lymph; Manamafy ny hoditra; Manatsara ny elasticité ny hoditra.
♦Tri-polar RF tahony:
mihena ny kitapo.manala ny sisiny mainty amin'ny maso. alaivo ny maso.
♦ Bio micro-current elektronika famporisihana handpiecefor maso hatsaran-tarehy ketrona fanesorana
Mini Kuma Shape Pro 5-In-1 Machine Contouring Body
Kuma Shape Pro 5-In-1 Masinina Contouring Body
Cavitation RF Lipolaser 6-In-1 Device dia manambatra ny teknolojia multipolar sy Bipolar RF miaraka amin'ny Vacuum, 40K Cavitation ary Lipolaser.
Multipolar sy Bipolar RF miaraka amin'ny Vacuum
Ny Multipolar RF mandroso dia manome angovo mafana ao anaty sosona derma, ary mamporisika ny fampiharana onja elektromagnetika hamerenana ny fizotran'ny fizika.Izy io dia manolotra vokatra fitsaboana mahomby amin'ny cellulite, ny fanaovana sokitra ny vatana ary ny fanavaozana ny collagen.
Miaraka amin'ny lohan'ny onjam-peo mahery vaika, ny onjam-peo matanjaka amin'ny 40KHZ dia mety havoaka mba hampihetsi-po ny sela matavy amin'ny hafainganam-pandeha ambony ary hamokatra paosin-drivotra maro ao anatiny sy ivelan'ny sela matavy, misy fiantraikany mafy amin'ny sela matavy hamokatra fipoahana introverted ary manimba ny triglyceride ho glycerol ary maimaim-poana. asidra matavy.
Fantatra amin'ny hoe laser malefaka, laser mangatsiaka na fitsaboana laser ambany, ny lipolaser dia mampiasa angovo laser 650nm mena mba hidirana amin'ny hoditra, rehefa simulate ny sela matavy, ny fonon'ny sela dia hamorona ny pores hamoaka asidra matavy sy glycerol.Ny selan'ny tavy dia hodorana na hodorana amin'ny alàlan'ny fikorianan'ny lymph miaraka amin'ny fitsaboana infrarouge.
Kuma shape X miaraka amin'ny tahony fitsaboana 4 no teknolojia farany indrindra hanatsarana ny endriky ny cellulite eo am-pilaminana sy
fanavaozana ny vatana.Mampiasa infrarouge sy onjam-peo izy io mba hikendry sy hanafana ireo tavy tavy amin'ny faritra manokana amin'ny vatana.
fa ny suction sy ny fanorana rollers malama sy contour ny hoditra.Azo antoka, mandaitra miaraka amin'ny fahombiazan'ny klinika voaporofo maneran-tany.